Ángela de la Vieja Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Langela de la Vieja
Isu tese tinoziva kuti kubudirira munguva ino nyowani yekutengeserana kwedigital kunoenderana nezvinhu zvakasiyana, saka kushandisa maturusi akakosha kwakakosha. Mutengo unoramba uchiita mamiriro ekugadzirisa kana uchiita sarudzo yekutenga. Imwe yematambudziko makuru akatarisana neCommerce mabhizinesi mazuva ano kugadzirisa mitengo yavo kuti ienzane nezvinotsvakwa nevatengi vavo nguva dzese. Izvi zvinogadzira chishandiso chemitengo chakasimba chakakosha kuzvitoro zvepamhepo. Dhijitari mitengo yemitengo, kuwedzera kune